Ningbo ZODI inovaka webhusaiti nyowani uye kusimudzira kweGoogle kuwedzera bhizinesi renji. Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji, hwakawanda hunyowani hutsva hwabuda. Network yekudzidzisa inozivikanwa zvakare nekuda kwematambudziko emagariro. Zvekuratidzwa pamhepo, kutaura zvazviri, ini handitsigire rudzi urwu rwebhizinesi m ...Verenga zvimwe »
Daihatsu brake wheel cylinders 47550-87304, 47560-87302, 47570-87304, 47580-87302,47510-87304, 47520-87301, 47530-87304, 47540-87301 uye clutch master cylinder 31410-87322 zvakagadzirwa munaGunyana, 2020. Daihatsu chinhu chitsva chemoto auto zvikamu kwatiri, zvakanaka kwazvo. Kukosha kwechigadzirwa chitsva ...Verenga zvimwe »
Kukosha kwaNingbo Zodi kuri kuvaka timu yechikwata chepamusoro .Takabata rwendo rwemazuva maviri rweMaoyang County, Xiangshan musi waAugust 20, mukati memazuva ataifara zvinonaka zvegungwa uye kushambira pamahombekombe. Tora zororo kubva pabasa rako rakabatikana kuti unakirwe nerunyararo rwechisikigo Tinogara zuva rese kubva mangwanani kusvika manheru zva ...Verenga zvimwe »